XZ1000A familiana fandavahana torolàlana marindrano dia manana savaivony mamelombelona indrindra 1200mm, hery manosika fatratra 1075kN, tanjaka 45000N · m, ary milanja 23t ny lanjan'ny milina mitanjaka.
Ny famolavolana boribory boribory boribory XZ3600 dia manana savaivony fandrefesana lehibe indrindra 1600mm, hery manosika 3600kN ambony indrindra, toradroa 120,000N · m, ary lanja milanja 48t.
Ny boribory boribory boribory boribory boribory XZ6600 dia manana savaivony mandrehitra ambony indrindra 2000mm, hery manosika 6600kN ambony indrindra, toradroa 210,000N · m, ary milanja 70t milanja milanja.
YG-13 mini rotary rig dia apetraka amin'ny Xugong XE55DA na Shanhe Intelligent SWE60E excavator mainframe. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny zoro miasa sy ny radius miasa dia voafantina ireo bitsika fandavahana ary ny savaivony fandavahana farany ambony dia mety hatramin'ny 1000 mm.
Ny rig fandavahana rotary mini YG-13 no safidy voalohany amin'ny fandavahana amin'ny toerana tery. Afaka miditra mora foana amin'ny rig fandavahana lehibe dia tsy afaka miditra amin'ny tranokala ho an'ny hetsika fandavahana, toy ny efitranon'ny ascenseur, ny fananganana anatiny, ny atin'ny ambany, ny fahazavana ambany amin'ilay tranokala. Ity maodely ity dia be mpampiasa tamin'ny fananganana fotodrafitrasa andry antontam-bato ambany fidinan'ny tanàna, lalambe ary lalamby mandeha amin'ny herinaratra.